“Waxa Ay U Muuqataa In Uu Unai Wenger Kooxda Hogaaminayo”:-Paul Merson Oo Sheegay In Ayna Arsenal Waxba Iska Badalin – Kooxda.com
HomePremier League“Waxa Ay U Muuqataa In Uu Unai Wenger Kooxda Hogaaminayo”:-Paul Merson Oo Sheegay In Ayna Arsenal Waxba Iska Badalin
“Waxa Ay U Muuqataa In Uu Unai Wenger Kooxda Hogaaminayo”:-Paul Merson Oo Sheegay In Ayna Arsenal Waxba Iska Badalin
September 4, 2019 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta 0
Halyeeyga kooxda Arsenal ee Paul Merson ayaa weerar ku qaaday tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery isaga oo bar-bar dhigay tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger.
Xiddigii hore ee Gunners ayaa sheegay in ay jirto dhibaato haystay kooxda markii uu kooxda hogaaminayay tababare Arsene Wenger ayna waxba is badalin kooxdu inkasta oo uu tababare kale hogaaminayo kooxda.
Paul Merson ayaa sheegay in ay Arsenal horumar yar samaysay tan ilaa markii uu Arsene Wenger ka tagay kooxda isaga oo sheegay “Unai Wenger ayaa haatan hogaaminaya kooxda”.
Gunners ayaa qaadatay go,aan ka duwan midkii hore xagaagii 2018 iyaga oo iska fasaxay tababare Arsene Wenger kadib 22 sano oo uu kooxda hogaamiyay shaqadana u dhiibay tababare Unai Emery.
Muhiimada ugu weyn ayaa ah in uu tababarihii hore ee kooxda PSG masuul ka yahay suuqa kala iibsiga xagaagan waliba isagu dooronayo xiddigaha uu doonayo in loo keeno.
Laakiin Merson ayaan qanacsanayn isaga oo aaminsan in ay kooxda haysato isla dhibaatadii haystay markii uu Arsene Wenger hogaaminayay inkasta oo uu tababare cusub qabsaday.
“Kulanka North London Derby waxa uu mid cajiig ah kulan fiican, Arsenal-na waxa ay qaadan lahayd bar-baraha markii 2 gool laga dhaliyay laakiin miyay wax iska badaleen Arsenal? uma malaynayo”.
“Arsenal waa loo garaabayay bur-burkii kulankii Liverpool todobaadkii hore laakiin in runta laga hadlo ayaa fiican Arsenal waxba iskama badalin, waxa ay u muuqataa in uu Unai Wenger kooxda hogaaminayo haatan”.
“Xitaa markii ay Tottenham daaleen waxa ay u muuqdeen kuwo gool dhalinaya Arsenal waxa ay ahaayeen kuwo fuan, dhibaatada khadka dhexe waxa ay ahayd qaar aad u xun”.
“Waxa ciyaarayay Granit Xhaka oo ordaya kadib khalad galay kaadhna loo taagayo, Haa Matteo Guendouzi Waxa uu dhiibay baas fiican goolkii bar-baraha laakiin kuma tiirsanaan kartid isaga iyo Lucas Torriera kamana sugi kartid in ay baas ka dhex bixiyaan daafacyada”.
“Xhaka, Guendouzi & Torreira Arsenal waxa ay haystay 3 xiddig oo aan ahayn kubad sameeye, waa saddex daafac oo khadka dhexe ee daafaca ah laakiin mar walba oo ay Tottenham daasho waxa ay haysteen xoriyada Emirates, waan rumaysan waayay in aan daawanayay waxa ay i xasuusisay markii uu Arsene Wenger kooxda maamulayay”.
Waxa ay tahay in ay is badasho ayuu Merson yidhi” 3-da weerarka ee Arsenal waxa ay u fiican yihiin sida kooxaha waaweyn ee premier League sida Liverpool iyo Man City, shaki la,aan laakiin weeraryahanada fiican waxa ay ku tiirsan yihiin in loo adeego, wax muhiim ah ma lahan sida aad u fiicantahay hadii aanad kubad helayn wax gool ahna ma dhalinaysid”.
“Adeeg la,aantaas Arsenal waxa ay ku tiirsantahay kaliya goolasha Nasiibka ah ee ay dhaliyeen weeraryahanadu goolal aan joogto ahayn arintaasna ma dhacayso kulan walba waxana ay noqon doontaa dhibaato”.
“Halka kaliya ee aan arko ayaa ah in uu Mesut Ozil ka daba ciyaarsiiyo 3-da weerar sidoo kale khadka dhexe ee daafaca ka ciyaarsiiyo laba xiddig iyo 4 daafac ah kadib Weeraryahandu waxa ay dhalin doonaan goolal aan joogsi lahayn”.
Saddex Sababood Oo Uu Neymar Doonayay In Uu Isaga Tago PSG Uguna Biiro Barcelona Oo La Ogaaday
Luis Suarez:”Xiddigaha Barcelona Waxa Aan Uga Diday Liverpool Ka Hor Kulankii Anfield Hal Arin Ayayna Guuldaradii Liverpool Igu Qasabtay”.